Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Mecca - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteellada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Mar waa magaalo cidla ah, Mecca, dhulka hadda loo yaqaan Sacuudi Carabiya, maanta ayaa ah Mecca dhabta ah ee Muslimiinta. Marka laga reebo inay tahay meesha ugu horeysa ee xajka ee muslimiinta adduunka oo dhan, waa caasimad dhaqameedka dunida Islaamka iyo dheriga dhabta ah ee dhalashada muslimiinta adduunka. Mecca ama Makkah, magaalada ugu karaamada badan Islaamka, waa meesha ay Nebi Muxamed ku dhashay kuna koray, isla markaana ay aaminsan yihiin muslimiintu inuu helay aayadihii ugu horreeyay ee Qur'aanka. Waana halkaan halka Kaaba waa - Masjidka ugu xurmada badan Islaamka, Masjid al-Haram, taas oo ah jihada ay umadaha islaamka ah ee aduunka oo dhami kala kulmaan markay tukanayaan salaada cibaadada Islaamka (salad). Masjid al-Haram ama The Grand iyo Masaajidka Xurmaysan, oo ah masaajidka ugu weyn adduunka, ayaa waxaa booqda malaayiin muslimiin ah sanadka oo dhan, gaar ahaan inta lagu jiro bisha ugu dambeysa ee kalandarka Islaamka, si ay u gutaan Xajka Virtual July 29, 2020, xajka taasoo ah waajib diini ah oo waajib ku ah qof kasta oo muslim ah oo awoodi kara.
Taariikhda Maka waxay dib ugu laabanaysaa Ibraahim (Ibraahim) oo dhisay Kacbada isagoo gacan ka helaya wiilkiisa ugu weyn Ismaaciil Ismaaciil qiyaastii 2000 BCE. 570 CE, Nabi Muxammad (NNKH) wuxuu ku dhashay Maka. Tan iyo maalmahaas, Maka taariikhdeeda iyo haybteeda waxay si aan kala go 'lahayn ugu xirnayd Islaamka.
Sida laga soo xigtay dhaqammada muslimiinta, 610, waxay ahayd Maka (gudaha godka Hira ee buurta Jabal al-Nour) halkaas oo Muxammad oo 40 jir ah uu waxyihiisii ​​ugu horreeyay ka helay xagga Eebbe, iyadoo loo marayo malaa'ig Jibriil. Muxammad ayaa markaa bilaabay inuu wacdiyo. Sannadkii 622, Muxammad wuxuu Makka ka tegey oo aaday Yathrib (oo hadda loo yaqaan Madiina) isagoo ka baqaya in la dilo qabiilka xukunka haya ee Quraysh, oo diiday inuu aqbalo Muxammad iyo wuxuu aaminsan yahay oo bilaabay inuu dhibaateeyo dadka raacsan diinta Islaamka. Markii Muxammad u haajiray Madiina oo uu halkaas degay, dhowr isku dhacyo hubaysan ayaa soo raacay kuwa raacsan Muxammad iyo qabiilooyinka maxalliga ah ee Maka, gaar ahaan midkii ay taageerayaasha Muxammad isku dayeen inay ku noqdaan Mecca 628 si ay u soo xajiyaan laakiin looma oggolaan inay galaan magaalada. Heshiis nabadeed ayaa ugu dambayntii la saxeexay kaas oo u oggolaanaya kuwa raacsan Muxammad inay ku noqdaan Maka. Sannadkii 629, Muxammad oo ay weheliyaan kumaan kun oo xertiisa ah ayaa dib ugu soo hayaamay magaalada Maka iyagoo ka soo hayaamay magaalada Madiina (halkaas oo uu ku noolaa muddo 13 sano ah) halkaas oo ay ku tageen Xajka, loona yaqaan xajkii ugu horreeyay. Sida laga soo xigtay muslimiinta, heshiiska nabadeed wuxuu ahaa in sidoo kale lagu daro xabad joojinta muddo 10 sano ah laakiin 2 sano kadib, Qureysh waxay jabisay heshiiskii ay ku gawraceen koox muslimiin ah. Muxammad iyo inta raacsan, asxaabtiisa iyo xulafadiisa hadda tiro ahaan aad bay uga xoog badan yihiin, sidaa darteed halkii ay ka dagaallami lahaayeen, waxay si fudud ugu soo wareegeen magaalada Maka oo ay sidaas ku keeneen is dhiibitaankii Qureysh ee Maka. Ugu dambeyntiina, Muxammad wuxuu magaalada u muslimay oo ka dhigay xarunta xajka muslimiinta, Xajka, oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka.
Makka waxaa xukumayay boqortooyooyin kala duwan 1500 sano ee la soo dhaafay. Laga soo bilaabo 1517 CE, oo kaliya hal hakad gaaban, Mecca iyo inta kale ee Hejaz waxay ku hoos jireen kantaroolka iyo mas'uuliyadda Turkiyiinta Ottoman iyo - ilaa qarnigii 10aad - hoggaanka diinta iyo ku meelgaarka ah ee Amiirrada Hashemite, oo ay dejiyeen Ingiriiska si uu ugu adeegto taliyeyaasha Transjordan iyo Ciraaq wixii ka dambeeyay jabkii Cusmaaniyiinta ee Dagaalkii Koowaad ee Adduunka 1924kii, Makka waxaa qabsaday qoyskii Sucuudiga ee maanta casriga ah ee Sucuudiga dagaal gaaban ka dib.
Calaamadda waddada kahor inta aan la gelin Maka
Fiiro gaar ah: Dadka aan Muslimka ahayn waa si adag loo mamnuucay laga soo galo magaalada Maka. Calaamadaha waddooyinka lagu hago dadka aan Muslimka ahayn ayaa la bixiyaa. The ugu yaraan ciqaabtu waa masaafurin dalka. Warqadaha doono waa la hubin doonaa marka aad soo gasho iyo qof kasta oo aan muujin caddayn inuu yahay Muslim diiday gelitaanka. Marka laga reebo keli ahaan, boosteejada baska Maka (ka baxsan xadka magaalada) is u furan dhammaan.
Ilaa iyo intaad dhalasho ka tahay Sacuudi Carabiya ama waddamada deriska la ah GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, iyo United Arab Emirates), qof walbaa wuxuu u baahan yahay fiiso uu ku galo Sacuudiga. Ergooyinka dibloomaasiyadeed ee Sacuudi Carabiya waxay soo saaraan fiisooyin gaar ah oo loogu talagalay kuwa gudanaya waajibaadka Xajka, ama Xajka ama Cumrada. Xujaajta badankood waxay doortaan inay adeegsadaan hay'ad takhasus gaar ah u leh socdaalka, taas oo wax ka qaban doonta waraaqaha muhiimka ah ee iyaga loo hayo. Sidii caadada u ahayd Sacuudi Carabiya, dumarku waa inay isla safraan nin ilaaliya (Maxamud), ilaa ay ka weynaadaan 45, la safraya koox isla markaana leh ogolaanshaha saxeexa mas'uulka.
Fiisooyinka xajka waxaa loo qoondeeyay nidaam kooto ah, oo ku saleysan tirada muslimiinta dal ku nool. Xaaladaha qaarkood, kuwii hore u soo gutay Xajka waxaa la saaray xayiraad dheeri ah oo la saaray Xajkooda soo socda, iyada oo la isku dayayo in laga hortago ciriiriga tirada badan iyadoo weli la dejinayo kuwa aan weli xajka gudan. Fiisooyinka Cumrada waxaa la heli karaa wakhti kasta oo sanadka ka mid ah marka laga reebo xilliga Xajka. Haddii codsaduhu uusan u dhalan wadan muslimiintu aqlabiyad ku yihiin ama uusan ku dhalan Muslim, asaga / isagu waa inuu keenaa shahaado nootaayo ka heleyso xarun Islaami ah oo ka markhaati kacaysa inuu isagu yahay muslim. Badanaa, masaajidkaagu wuxuu awoodi doonaa inuu tan diyaariyo ama ugu yaraan tilmaamo jidka.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee King Abdulaziz (), Jeddah waa marinka Maka. Dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee gobolka waxay u adeegaan garoonka sanadka oo dhan. Isla garoonka diyaaradaha ayaa la isticmaali karaa marka la imaanayo Cumrada.
Terminal-ka Xajka ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cabdulcasiis waxaa la adeegsadaa oo keliya xilliga Xajka, waxaana inta badan ka shaqeeya duulimaadyo charter ah oo ay diyaariyeen diyaarado ganacsi oo heer gobol ah, in kasta oo ay jiraan adeegyo qorshaysan sidoo kale
Ikhtiyaar kale waa Gegada Diyaaradaha ee Ta'if ee Ta'if oo sidoo kale loo isticmaali karo in lagu galo Mecca; hase yeeshe kaliya dhowr shirkadood ayaa ka shaqeeya halkan, gaar ahaan kuwa dalalka Khaliijka ee deriska la ah.
Waxaa jira jid aad u fiican oo casri ah oo fara badan oo ka socda Jeddah oo loogu magac daray Highway # 40. Masaafada waxay u dhowdahay 100 km safarkana wuxuu qaadanayaa saacad. Inta lagu jiro xilliga Xajka waxaa camiran basas ay ka buuxaan xujeydu. Waqti kasta oo kale, taraafikada ayaa si aad ah ugu fududahay baaxadda wadada.
Dhowr mayl meel ka baxsan Mecca, waxaa jira goos goos loo yaqaan "Christian bypass". U leexo wadadan weyn si aad u kaxeyso meel kale oo 50 mayl ah (80 km) si aad u gaarto magaalada buuraleyda ah ee quruxda badan ee Ta'if. Taif, oo dhererkiisu yahay 5,000 fuudh (1,500 m), wuxuu ahaa qasrigii hore ee xagaaga ee Boqortooyada Sacuudiga. Haddii aad ku sii nagaato waddada weyn ee weyn, waxaa jira bar kontorool oo booliis ah isla marka laga baxo, halkaas oo dadka aan Muslimka ahayn ay ka gudbi karaan magaalada barakeysan.
Tareen ku tag Mecca
cusub ee Xaraway tareen xawaare sare ku socda isku xidha Maka iyo Madiina via Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee King Abdulaziz, King Abdullah Magaalada Dhaqaalaha iyo Jeddah, siddeed jeer maalintii. Adeegga waxaa la rajeynayaa in lagu kordhiyo 12 duulimaad maalinle ah sanadka 2019. Waqtiga safarka ee ka imanaya Jeddah waa ka yaryahay 30 daqiiqo halka safarka dhan ee Madiina uu qaadan doono wax ka yar laba saacadood. Saldhiga tareenka ee Mecca waxay ku taalaa wadada giraan 3aad, agagaarka Rusaiyfah.
Tagaasida waxaa lagu bogaadinkaraa meelkasta oo Jeddah ah Mecca qiyaastii SR250 inta lagu jiro xilliga caadiga ama qiyaastii SR500 inta lagu gudajiro Xajka iyo jiilaalka. Gegada diyaaradaha Jeddah, waxaad sidoo kale taksi kula wadaagi kartaa xujaajta kale haddii aad rabto taas oo kala badh ka bixin doonta safarka qofkiiba.
SAPTCO waxay adeegyo ka waddaa Mecca oo ka kala socota waddanka oo dhan, in kasta oo inta badan xujaajtu markay u imaanayaan Cumrada ama Xajka, ay ku yimaadaan basas gaar ah oo kireysan ama baabuur ka yimaada Jeddah.
Waxaa jira labo boosteejo: xarunta ugu weyn ee ka baxsan xadka magaalada waa u furan tahay dhammaan, laakiin xarunta bartamaha magaalada ee Haram al Sharif, oo inta badan basaska u taga Jeddah, ayaa ku kooban muslimiinta oo keliya. Hal safar ayaa ku kacaya SR15 safarkuna wuxuu qaadanayaa 1 saac. Basasku waxay baxaan maalintii oo dhan kadib markay udhaxeeyaan 1-2 saacadood laga bilaabo subaxa hore 6 ilaa saqda dhexe 12.
Basaska maxalliga ah, tagaasida, iyo basaska yaryar ayaa si ballaaran looga heli karaa magaalada Maka waana qaali. 18 kiiloomitir (11 mi) Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro ayaa la furay Nofeembar 2010. Wadar ahaan 5 khadadka metro ayaa loo qorsheeyay in lagu qaado xujaajta goobaha diinta.
Muuqaalka Masjidka Weyn iyo xujaajta Tawaf
Masjid al-Haram (Masaajidka Xurmaysan). Meesha ugu muqaddassan ee Maka iyo Islaamku waa Masaajidka Weyn. Masjidka weyn ayaa ah masjidka ugu weyn aduunka waxaana ku wada xajmi kara hal milyan oo qof hal mar. Masaajidka si joogto ah ayaa loo balaadhiyay walina wuxuu marayaa balaarin iyo dayactir balaaran. Masaajidkani waa barta xudunta u ah gudashada xajka iyo cumrada. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Kaaba. Bartamaha masjidka weyn waa Kaaba, oo sida ku xusan dhaqanka muslimiinta ay dhisteen nebi Ibraahim iyo wiilkiisa, Nebi Ismaaciil. Oo lagu daboolay maro madow, waxaa ku wareegaya toddobo jeer xujeyda muslimiinta ah waxayna u jeeddaa dhanka Kacbada ee ay muslimiintu u wajahayaan jihada iyagoo tukanaya salaadaha Islaamka. Dhagaxa Madow ee Muxammad laftiisu si toos ah u galay gidaarka dhagaxa rukunka ee Kacbada ee Muxammad laftiisu waa taariikhi Islaami ah oo, sida ku xusan dhaqanka muslimiinta, ay soo bilaabatay xilligii Aadan iyo Xaawo. Dad badan oo Muslimiin ah oo xajka tagaya inta ay Tawaafka samaynayaan waxay isku dayaan inay dhunkadaan oo taabtaan dhagaxa muqaddaska ah; si kastaba ha noqotee, tani badanaa waxay u baahan tahay dadaal badan sababtoo ah dadku way badan yihiin. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Maqaam-Ibraahim. Kaaba dhiniciisa waxaa ku yaal qubbad madmadow oo la yiraahdo Maqaam-e-Ibrahim, oo ay ku jirto dhagax la rumeysan yahay inuu raad ku leeyahay cagta Ibraahim. Caadooyinku waxay qabeen in Ibraahim intuu dhisayay darbiyada dhaadheer ee Kacbada uu ku dul istaagay dhagaxa oo si mucjiso leh kor ugu kacay una sii daayay Ibraahim inuu sii wato dhismaha. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Al-Safa iyo Al-Marwah. Kuwani waxay ahaayeen labada buurood ee yaryar ee hadda si fiican loogu beddelay galleelyo dhaadheer oo si wanaagsan loo dhisay oo leh dabaq marmar ah isla markaana leh qalab-hawo leh. Dhaqammada muslimiintu waxay qabeen in Haajara, afadii Ibraahim, ay dib iyo gadaal u dhex orday labada buur dhexdooda iyadoo raadineysa biyo wiilkeeda Ismaaciil. Waxaa la rumaysan yahay inay markii ugu horreysay fuulay buurta Al-Safa ka dibna markii dambe ay fuushay Al-Marwah. Maanta muslimku wuxuu ku dhaqmaa socod halkaan loo yaqaan 'Sa'ee' wuxuu ku lug leeyahay socodka labada buurood inta u dhexeysa toddobo jeer. Safar kasta wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 300 m oo socod ah iyo qiyaastii 2.1 km wadar ahaan. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Godka Xira (Ghaar-e-Hira), Jabal Al Noor (3 kiiloomitir Mecca). Godka Xira waa goob muhiim ah, tan iyo buurta dusheeda loo yaqaan Jabal Al Noor waa halka ay muslimiintu rumaysan yihiin in Muxamed markii ugu horreysay uu Quraanka kariimka ah uga soo dejiyey xagga Eebbe iyada oo loo marayo malaggii Jebril. Xujaajtu waxay inta badan fuulaan godka oo istaagay meel dhererkeedu yahay 270 m si ay u arkaan meesha uu Muxammad aaminsan yahay inuu ku soo degay Quraankii ugu horreeyay. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Godka Thawr (Ghaar-e-Thawr), Jabal Thawr. Halkani waa godkii uu ku dhuuntay nabi Muxamed markii uu u amba baxayay Yathrib (oo hada ah Madiina) kana yimid magaalada Maka halka ay eryanayeen Qurayshtii reer Maka oo qorshaynayay inay wax yeelaan. Sida dhaqanku qabo, mar haddii Muxammad iyo saaxiibkiis ay ka soo galeen godka, waxaa irida ka xirmay caaro oo tuurtay shabakad si ay ugu daboosho waxayna u muujisay xubnaha reer Quraish inaysan jirin cid ka soo gashay godka muddo dheer. waqti sidaas badbaadiyey nolosha Muxammad. Maanta, xujaaj badan ayaa fuulaya buurta dheer ee 1,405 m si ay u arkaan godka. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Jannat al-Mu'alla. Halkani waa qabuuraha ay ku aasan yihiin asxaabtii iyo qaraabadii Nabi Muxamed, oo ay ku jiraan xaaskiisii ​​koowaad, adeerkiis, awoowe, awoowgii, iyo awoowgii weyn. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Matxafka Al-Xarameyn (متحف الحرم شریف). Madxafka waxaa ku yaal waxyaabo badan oo taariikhi ah oo soo jireen ah.
Abraj Al Bayt (Makkah Royal Clock Tower Hotel) (oo ku dhegan Masjidka weyn). Dhismahan megatall 601 m wuxuu noqday astaan ​​casri ah oo Maka ah. Waa dhismaha seddexaad ee ugu dheer aduunka waxaana kujira wejiga saacadaha aduunka ugu weeyn. Dhismuhu wuxuu ku yaal hudheel shan xiddigle ah, aag ballaadhan oo lagu tukado oo awood u leh inuu qaado 10,000 oo qof, 5-dabaq weyn oo laga dukaameysto, iyo maqaaxiyo badan. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Mina. Mina waa xaafad ka mid ah Maka. Waxay leedahay naanaysta ah Tent City, maaddaama ay jiraan boqollaal kun oo teendhooyin hawo leh oo ku yaal aagga, kuwaas oo u shaqeeya sidii ku-meel-gaadh ku-meel-gaadh ah oo loogu talagalay xujaajta xilliga Xajka. Buundada-keliya ee lugeynaya ee Jamaraat, halkaasoo lagu sameeyo caado astaan ​​u ah Dhagxaanta Ibliiska, ayaa ku taal halkan. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Buurta Carafa (Jabal Raxma). 70m (230 ft) dhererka sare ee Carafaat waa buur dhagax weyn oo ku taal bannaanka Maka waa goobtii uu Nebi Muxamed taagnaa oo uu ku gaarsiiyay Muslimiinta Khudbadii sagootinta ahayd maalintii ugu dambeysay noloshiisa. Inta lagu gudajiro Xajka, xujeydu waxay maalintii oo dhan ku qaataan buurtaan iyo hareeraheeda iyagoo tukanaya. (la cusbooneysiiyay Apr 2015)
Xujaajta Buurta Carafa
Lugee Buuraha Maka
Booqo Ghar Hira, halkaas oo aayaddii ugu horreysay ee Qur'aanka lagu soo dejiyey nebiga Muslimka ah ee Muxammad.
U soo ducee kuna aqriso quraanka masjidka al xaraam, dabcan hadaad muslim tahay.
Dukaameysiga magaalada si ballaaran ayaa looga heli karaa. Gorgortanku had iyo jeer waa ikhtiyaar markaad wax ka iibsaneyso gudaha.
Intii ay joogeen Maka, xujaaj badan waxay iibsadaan tuwaal-gacmeedyo ay ku xasuustaan ​​waqtigooda iyo xusuus ay ugu soo celiyaan qoyskooda iyo asxaabtooda. Biyaha Zamzam waa bilaash. Waxaa lagu cunay Mecca waxaana loo keenay guriga xusuus ahaan.
Waxyaabaha kale ee laga iibsanayo magaalada Maka iyo hareeraheeda waa: derinnada salaadda iyo koofiyadaha, kuullada salaadda iyo barafuunka.
Waxaa jira noocyo badan oo cunno ah oo laga helo adduunka oo dhan oo laga heli karo Maka oo dabcan waa Xalaal, laga bilaabo cuntada Bariga Dhexe ee Bariga illaa cuntada Koonfur-bari Aasiya. Waxa kale oo jira silsilado cunno dhakhso leh oo Mareykan ah sida Kentucky Fried Chicken iyo Dunkin Donuts.
Ma jiro nooc ka mid ah doofaarka, ham ama qayb ka mid ah doofaarka oo loogu adeego Sacuudi Carabiya sida uu xaaraantinimeeyay Sharciga Islaamka. Tani waxay Saudi Arabia ka dhigeysaa dalka kaliya ee xalaal laga cuno adduunka.
Waxaa ku yaal Makhaayada Al-Baik oo ku dhegan Masaajidka Xurmaysan.
Cab Biyaha Zamzam
Ceelka Zamzam agtiisa.
Biyaha Zamzam- Biyo barakeysan oo ka soo baxa guga Zamzam ee Masjidka al-Xaraam oo la rumeysan yahay in rabbi barakeysan yahay ayaa laga doorbiday xujeyda Maka.
Waxaa jira dukaamo shaah oo badan oo laga adeegto shaaha iyo buskudka. Waxa kale oo jira dad badan oo casiir ka iibiya isla Masaajidka dibaddiisa, kuwaas oo iibiya tufaax, cambe iyo casiirrada miraha loo yaqaan 'SR1'.
Xagee looga joogaa Maka
Mecca waxaa ka buuxa hudheelo, laga bilaabo Hilton illaa hudheelo aan la garanayn oo leh adeegyo kala duwan. Qiimuhu waa ku kala duwan yahay masaafada hudheelka ee Masaajidka barakaysan. Qaar ka mid ah hudheelada adduunka ugu waaweyni waxay ku yaalliin Maka, waana kuwo dhammaystiran sannad-dhan. Hubso inaad waqti sii qabsato, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u ogaato taariikhda safarkaaga.
Dar Al Tawxiid Makka (Qaaradaha-Qaaradaha), Ibrahim Al Khalis St (Mecca Ka Bax Mecca),. Raaxo ka baxsan Magaalada Quduuska ah. Hoteelka ayaa qurux badan oo leh muuqaalka Maka. Shaqaalaha waxay ku hadlaan Carabi, Ingiriis, Faransiis, Hindi, Indooniisiya iyo Punjabi.
Hotel Elaf Al Huda. Qolal fudud oo hawo-qaboojiye kaliya 15 daqiiqo ka socda Xaramka. Waxay sidoo kale siiyaan xamuul xaramka. laga bilaabo $ 105.
Wadamada Qaaradaha Qaaradaha, Wadada Old Jeddah,. Sarajoogga raaxada ee gudaha gidaarka magaalada.
Qasriga Makkah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Maka
Inkasta oo ay jiraan tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo dadka, xad-dhaaf ah iyo shaambadaha waa khataro waaweyn inta lagu jiro bisha Xajka, iyagoo dilay tobanaan qof. Mina, Jamrat iyo buundooyinka u horseedaya iyaga ayaa la ogyahay inay si gaar ah khatar u yihiin, in kasta oo tallaabooyin loo qaaday si loo yareeyo tan: hadda waxaa jira afar buundooyin is barbar socda oo waddada loo maro hadda waa mid aan loo baahnayn.
Inta lagu guda jiro Xajka, jeeb-jeebyadu maaha wax aan caadi ahayn. Ka fogow inaad wax qiimo ah ku yeelato qofkaaga markaad dhex marayso dadka badan. Si kale haddii loo dhigo, dhinaca nabadgelyada ahaaw oo fursado ha qaadin.
Xujaajta badankood waxay sidoo kale booqdaan Madiina, oo ah magaalada labaad ee ugu barakaysan Islaamka.
Al Shohada Hotel Makka
Le Meridien Towers Hotel Makka
Ofuk Al-Fateh 2 Hotel Makka
eHalal Safarka Mart > Safarka Islaamka ee Sacuudiga > Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Maka